မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ(၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ(၃)
Posted by မိုးတိမ် on Oct 17, 2012 in Contributors, Copy/Paste | 15 comments
မယား ၄ယောက် ….လင်ကြီး ၁ ယောက် ( ရှယ်လုပ်ပြီး ) …..မူဆလင် ကလေး အယောက် ၂၀ ….နိုင်ငံတိုင်းကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းကြမယ်။
အစွန်းရောက်မူဆလင်များကို မြန်မာ့ ” သွေး ” မြန်မာ ” ဇ ” နှင့် ကောင်းကောင်း သမ နိုင်သော်လည်း
နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့နိုင်ငံများမှ ငြိမ်းချမ်းသော မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းကို ဥရောပတိုက်မှ အမျိုးသမီးများ ယှဉ်မမွေး နိုင်သောကြောင့် ……
မိမိ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ဘာသာကို နေရင်း၊ ထိုင်ရင်းနဲ့ကို မူဆလင်များဧ။် ဗလီဆောက် လူဖေါက်နှုန်းအောက်တွင် လူနည်းစု ဘ၀ ကျရောက်သွားပါက ….
ခင်ညားကြီးသာ မဟုတ်တာတွေလက်မခံရင် ကျုပ်မတင်ချင်တော့ဘူး။
စောက်ခွေးကုလားတွေ ထပ်မတင်ရင်ကျုပ်လဲ မတင်ချင်ဘူး။မိုဟာမက်ရဲ့ အကြောင်းတွေ အသေးစိတ်သူတို့ရဲ့ ကျမ်းစာ အတိအကျပါပါလာတော့မယ်။လိမ်မရတဲ့ သက်သေတွေပါထည့်ပေးချင်နေတာ၊
ခင်ဗျားက ကျုပ်တို့မကြိုက်တာတွေ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးရင်ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ဟိုဘက်ကကောင်တွေ
မဟုတ်တာတင်ရင်ကျုပ်ကလဲ တင်ပါမယ်။ကျုပ်ကလဲ မတရားတာမလုပ်ပါဘူး၊ တာဝန်မယူရဲတဲ့ကောင်လဲ
မဟုတ်ပါဘူး။မတရားဘူးထင်လို့ကျုပ်ဝင်ပါရတာပါ။ခင်ဗျားက သောက်ကုလားတွေကြကြောက်တတ်လိုက်တာ ကျုပ်တို့ကြတော့ ခင်ဗျားက တာဝန်ယူရဲလားဘာလားနဲ့။ဟိုကောင်တွေကော ခင်ဗျားမေးခဲ့လား။အားပေးအားမြှေက်တောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်။အဲဒါကြောင့်သိအောင်တင်ပေးတာ
နောက်တင်တဲ့ဟာတွေက သူတို့လိုပဲ ပိုပိုကြမ်းတမ်းအောင်တင်ပေးတော့မှာကြောင့်ကြိုမေးထားတာပါ။
ဒီမှာလည်း တိတ်တဆိတ် လာရောက်အားပေးခဲ့ဘူးပါတယ် …
ကိုရင် မိုးတိမ်ရေ …..
တစ်ရက်လောက်တော့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ ….
ဒေါသတွေ မောဟတွေ ပွားနေရင် မှားတာသာ အဖတ်တင်မယ် မထူးဖူးဗျ……
တိမ်တိမ် ပြောတာကို သဘောတူပါတယ်……
ဒါပေမယ့် MG ကိုလည်းတချက်တော့ပြန်ကြည့်ပါအုံး………..
အခုကိတ်စတွေကို တရားသဖြင့်ပဲ စီရင်ဖို့အများစုကကြိုးစားနေပါတယ်………….
အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ဘက်က အမှားမပါဖို့ လိုတယ်လေ……………
တနိုင်ငံလုံးကလည်း ဒီကိတ်စကို အရေးကြီးကြောင်း သိတဲ့အကြောင်းကို ပီးခဲ့တဲ့ OIC အရေးတော်ပုံမှာ လက်တွေ့ မြင့်ခဲ့ပီးလောက်ပါပီ…………
သမိုင်းပြန်လှန် အမုန်းပွားမယ့်အစား မျှတသော တရားဥပဒေနဲ့ဒီကိတ်စကို ဘယ်လိုထိန်းမလဲဆိုသော အပြုသဘောဆောင် ဆွေးနွေးချက်များသာ ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း အကြံပြုလျက်……….
ဟူး……မောတယ် ရှေ့ရေးကိုမျှော်ကြည့် ရင် ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော ဘယ်သူ့ကိုမှ မစော်ကားပဲ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါမယ်၊ ဂဇက်မှ အခုလို ဘာသာရေး လူမျိုးရေးကိစ္စတွေပေါ်လာတာ သဂျီးရဲ့ စီမံကွပ်ကဲမှု အားနည်းချက် မကင်းဘူး။ ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်ကာစလို အချိန်မှာ နှစ်ဖက်သွေးဆူနေလို့ အပြန်အလှန် တင်ကြရေးကြတာ နားလည်လို့ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်း အားလုံးက တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ (အနည်းဆုံးတော့ ရွာထဲမှာပေါ့လေ) မွတ်စ်တွေဖက်က ရခိုင်ပြသနာကို မြင်းအီးတဘူဘူ ပေါက်သလို မပြီးနိုင်မစီးနိုင်၊ ရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့ လှုံဆော်စွပ်စွဲ စာများတင်နေတာ တားဆီးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ လာတင်သူများကလည်း အသစ်တွေ၊ ဒါမျိုးပဲ တင်တတ်သူတွေ၊ တမင်တကာ ဖျက်ဆီးဖို့ ဝင်လာတာဆိုတာ သိသာတယ်။ သူတို့ကို မတားဆီးနိုင်ရင်တောင် တင်လာတဲ့ပို့စ်များကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရမယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးကို ပြောတာပါ။ သို့ပေမဲ့ သဂျီးက မူလကျီလုပ်နေတော့ အက်ရှင်တိုင်းမှာ ရီအက်ရှင်ရှိသည် ဆိုတဲ့အတိုင်း တန်ပြန်အကျိုးဆက်များ ပေါ်ပေါက်လာရတာပဲ။ သဂျီးအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမွတ်စ်စလင်အဖွဲ့ OICကနေ ကြော်ငြာခ ဒေါ်လာသိန်းသောင်းချီရလို့ မျက်ကွယ်ပြုနိုင်ပေမဲ့ ကျုပ်တို့လို တရားမျှတမှု မြတ်နိုးသူတွေ အနေနဲ့ကြတော့ လက်ပိုက်ကြည့် မနေနိုင်ဘူးဗျ။ ပြောစရာရှိ ပြောရမှာပဲ။ ရန်မီးဆက် မပွားစေချင်ရင် နှစ်ဖက်စလုံးတင်လာတဲ့ အချက်အလက် မပြည့်စုံ၊ အခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖျက်သိမ်းပါ။ စာရေးသူတွေကို အရေးယူပါ။ လိုအပ်ရင် သဂျီးဂဒေါ်နဲ့ ဖက်အိပ်ချိန် မြန်မာပြည်ကလူတွေ ပင်ပန်းပန်း ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ စားသောက်ချိန်မှာ ယုံကြည်ရတဲ့ မော်ဒရိတ်တာအဖွဲ့ကို ဂဇက်ရွာ ပတ်စ်ဝက်ဒ်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်ခိုင်းပါ။
သာမီးက ဒဂျီးအိပ်တဲ့အချိန် ရုံးက အရဂါးရတဲ့ အိမ်သာနက်ကို ခိုးသုံးပြီး ကင်းစောင့်ပေးမယ်လေ.. အူးကြောင်..
သာမီးက ယုံကြည်ရတဲ့နေရာမှာ အဆင့်ကုန်…
နောက်ထှာနော်.. အတည်… :harr:
ကျန်သွားလို့…. ဒီအရေးမှာ မွတ်စ်အယောင်ဆောင်တွေ လက်ချက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး နည်းတွေပေါ့ဗျာ။ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ အဲဒါကိုတွက်ပြီး ကြည့်နေပြန်တော့လည်း တဖက်သတ်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။ လိုတာထက် ပိုနေတယ်။ ရေးချင်ရင် သင့်တော်တဲ့အချိန် ပေါ်လာတဲ့ပြသနာကို မူတည်ပြီး သုံးသပ်ဝေဖန် ဆွေးနွေးကြပါ။ နို့မို့ရင် ဦးကြောင်ကြီး မဂိုမလေးနဲ့ ဝေးရတော့မယ်။ မာမူဘာဘူရွာဆူအယာတိုလာဦးကြောင်ကြီး
သတင်းတွေ ဖြစ်ရပ်ပြောင်းပြန်တွေ လာတင်တာကို ဦးခိုင် အနေနဲ့ အားလုံးကို
ချက်ခြင်းမသိနိုင်ပေမဲ့  သိနိုင်သော မန်ဘာကြီးများမှထောက်ပြတဲ့ အခါမှာ
အရေးယူ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ပါပဲ ။
အမှန်သိနေတဲ့ အခါ ခံရခက်ပါတယ် ။ ပို့စ်တွေကိုပိတ်ရင်လည်း မန်ဘာအဆင့် 
အတန်းမခွဲခြားပဲ ပိတ်သင့် တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။ကွန်မန့် မရေးပို့ စ်မတင်သော်လည်းပဲ
ဂဇက်ကိုအမြဲဖတ် ပြီး သံယောစဉ်ကြီးတဲ့ သူတွေရှိပါတယ် ။
ဟိုနေ့ ကပို့ စ်တစ်စောင်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အဆင့် မန်ဘာများ ဖတ်မရပါ။
ကွန်မန့် များတက်လာတာတွေ့ ရပါတယ် ။
လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာ အသုံးမချတတ်သူလက်ထဲမှာ
စော်ကားခွင့်ဖြစ်သွားတတ်တာ ဦးခိုင်လည်းသိပြီးသားပါ ။
စော်ကားတယ်ဆိုရာမှာ ဆဲ မှစော်ကားတာမဟုတ်ပါ ။ မထိတထိ နဲ့  နှိမ်ချ
ရေးသားလျှင်လည်း စော်ကားခြင်တမျိုးသာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ထိုသို့ သော
အဖွဲ့ သည်လည်း ဘာသာရေးကိစ္စများ၌ ရေးသားတတ်ပါကြောင်း …
မုတ်ဆတ်ဦးခိုင်အနေနဲ့ ကြားလူအမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆို သိနိုင်ကောင်းပါတယ်။ margin of error percentage ဟိုဖက်ဒီဖက်ထားပြီး ပိတ်သင့်တာ အရေးယူသင့်တာကို ချက်ခြင်းလုပ်နိုင်ကောင်းပါတယ်။ အတိအကျတော့ ဘယ်ဟာမှ ရဘူးပေါ့လေ၊ ရလည်း လွတ်လပ်ခွင့်မူကို အကြီးအကျယ် ထိပါးသွားတာမို့ အကျိုးအနဲ့အပြစ် မကာမိနိုင်ဘူး။ အကျန်ပေးချင်တာ ဖြစ်ရပ်အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး ပို့စ်ရေးသားမှု လွတ်လပ်ခွင့်ရေချိန် အတိုင်းအတာကို လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပါ။ သာမန်အချိန်တွေမှာ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ စာမျိုးတွေကို လက်မခံပါနဲ့။ ဒါဆို ထိခိုက်နာကျင်မှု အတော်သက်သာ သွားပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာ မြန်မာပြည် သို့ ယူအက်စ်အပြင်ဖက်က စာဖတ်သူတချို့ကို မော်ဒရိတ်တာခန့်ပါ။ သူတို့ကို post pending လုပ်ခွင့်ပေးပြီး အချိန်မဆိုင်းဘဲ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တောင်းပါ။ နောက်ဆုံးမှ သဂျီးပါဝါနဲ့ ဆုံးဖြတ် တာဝန်ခံပါ။ ကြောင်ကြီးအနေနဲ့ သဂျီးသားမက် မဖြစ်သ၍ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်တယ်။ ကြောင်ကြီးဆီက အကူအညီ တကယ်လိုချင်ရင် သဂျီး လူဂျီးတယောက်အနေနဲ့ သိတတ်ပါ….။ :harr:
အခုလောလောဆယ်မှာ ကာဖျူးသဘောမျိုးလို… ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပို့စ်တွေ ပေးမတင်သင့်ပါဘူး….
ဘရိမ်းစတောင်း လုပ်ချင်ဒါဒွေ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကို သရော်ချင်တာတွေ ခဏရပ်ဦး ဒဂျီးရေ…
ဟီ.. ဟီ့ ကြုံဒုံး… အဆင်းဘီးတတ်မှ
တို့လည်း ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုလိုက်ဦးမယ်…………။ ကိုမိုးတိမ်ရေ…….. ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးပြီလား????????
Scribd.com မှာတင်ထားတာတွေက ကျွန်တော်တို့ ဒေါင်းလို့ မလွယ်ဘူးဗျ…။ ဒါကြောင့် အခြားနေရာကဒေါင်းလောဒ်ချပြီး minus.com မှာပြန်တင်ပေးထားတာပါ………။
ရွာထဲ.. အပြင်မှာ.. မျက်နှာပြထားသူ..
သူတပါးအီးမေးလ်.. စာတွေလည်းတွေ့နေရ.. ပြင်ဆင်ခွင့်လည်း ရှိသူများသာ ဖတ်လို့ရပါကြောင်း..။
လူမျိုးဘာသာ တိုက်ခိုက် စော်ဂါးတာမှန်သမျှ ဖျက်သင့်တယ်..
မသေချာပဲ ဘယ်သူ့ မကောင်းကြောင်းမှ မပြောတာ ကောင်းတယ်
ထပ်ပြီး အကျယ်ချဲ့ နေသမျှ ကိုယ့်ဘက်က နစ်နာဖို့ ပဲရှိတယ်..
သဂျီးပြောဖူးသလို အစိုးရက ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ကုလားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် တော့ စိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျ
သတိဝိရီယနဲ့နေနေကြရမယ်လို့ ထင်တယ်..
အင်အားများတဲ့ဘက်က သာတာမိုလို့သူတို့ မျက်နှာထောက်သင့်ပါတယ်..
လန်ကြုတ်သတင်းလို့ ယူဆရသမျှကိုလဲ သဂျီးအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ သိမ်းထားပြီး ဖျက်သင့်ဖျက်ထားသင့်ပါတယ်..
ဒီလို ပိတ်ပင်ထားတာ နောင်ရေးအတွက် အကျိုါ်မယုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်..
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး အချက်ကျကျမပြောတတ်လို့ 